China Simba indoor grill muchina Kugadzira uye Fekitori | Chuliuxang
Batanidza yako yemagetsi bbq grill, unganidza zvinongedzo, uye gadzira tafura.
Kubika neCLUX electric grill zviri nyore. Ingo shandura tembiricha dial nzira yese kumusoro kuti utsvage. Kana yasvika pakupisa kwekushisa kwepamusoro kwe450 degrees, chiedza chegreen preheat chinopenya. Iye zvino wagadzirira kutsvaga steaks, burgers, pork chops kana hove fillet kusvika pakukwana. Kana iwe uchida kugocha chikafu chisingade kutanga chasecha, shandisa tembiricha inogadziriswa dial kune grill pane yakaderera kupisa.
TEMPERATURE SETINGS: Iyi grill yemagetsi inouya ine tembiricha yekudzora system, ichikubvumidza kuti ugadzirise zviri nyore tembiricha yekubikira kubva 0 ° F kusvika 300 ° F kuti uwane yakakwana huwandu hwekupa hwaunoda.
KUSVIRA SURFACE: Iyi grill yekubatanidza inouya negrill isina-stick.Iyo griddle ndiro yakakodzera mapanikake, mazai uye bhakoni; iyo grill plate inogona kuwana echokwadi magrill mamaki pambabvu, steak uye hove.
KUDZIVIRIRA KUNOWANDA: Iyi yemagetsi BBQ grill ine tembiricha tsono, inongomira kudziya kana tembiricha yemukati yanyanya. Kunze kwezvo, maviri maviri tembiricha ekudzivirira ekudzivirira maturusi anoita kuti ive yakachengeteka kushandisa.
ZVINYORE KUCHENZA: Iyo isiri-tsvimbo yekupfekedza inoita kuti ndiro yegrill ive nyore kucheneswa nekupukuta zvinyoro. Iwo mahwendefa egrill, pani yekuunganidzira mafuta uye chivharo chefan chinobatika chinobatika uye dhishivha yakachengeteka. CHERECHEDZA: Iyo tireyi yekudonha inogona kudzima mudhishi, ndapota ichenese nemaoko.
Zvakapfuura: Kunze kubika gasi grill
Zvinotevera: Simbi isina tsvina 4 inopisa gasi grill
barbecue yemagetsi grill
kumba electric grill
indoor smokerless grill
tabletop yemagetsi grill
Rotisserie Oven Inotenderera Barbecue Grill